IziNtaba eziManzi zeSSS zokuhlukanisa kuyisinyathelo esenzelwe ukuqwashisa umphakathi ngamanzi asemanzini nezinzuzo eziningi ezempilo yabantu kanye nemvelo. Ukuze uhlangabezane nalomgomo, i-SWS idale isitoreji esisodwa sokuthola ulwazi nge-biology, isimo semvelo, isimo sokulondolozwa, nokufinyelela komphakathi ezindaweni ezisemadolobheni aphezulu. I-SWS iphinde ihlanganyele neKomidi lika-US National Ramsar ngakho lesi sinyathelo singaba imoto yokuthola nokucubungula izicelo ezizayo ze-US Ramsar ukuqokwa.
Njengamanje sisesimweni sokwakha i-inventory yamaxhaphozi okwakubhekwa kubalulekile yi-ejensi nezinhlangano. Samukela futhi izinhlelo zamasayithi amasha avela ochwepheshe bezolwandle, abathandekayo basezindaweni zasemanzini, izinhlangano, nabantu ngabanye. Isinyathelo sokuqala ukuhambisa uhlelo lokusebenza. Uma isicelo sesithunyelwe, sibuyekezwa yiqembu labaqeqeshi bezolwandle ukuze kuqinisekiswe ukuthi izidingo ze-SWS Wetlands of Distinction status zihlangene. Isigaba ngasinye se-SWS sinomchwepheshe wezolwandle omele ukukusiza ngesicelo sakho.
Sicela uthumelele ikomidi ku-swswetlandsofdistinction@gmail.com nganoma yimiphi imibuzo. Sicela uvakashele i-www.wetlandsofdistinction.org ukuze ufunde kabanzi mayelana nesinyathelo, bheka i-Wetlands ekhona ehlukaniswayo, yenza i-akhawunti, futhi ngethemba lokuthi uzofaka isicelo se-wetland oyikhonzile.